Wasiir Dubbe oo shaaciyey in Dagaalkii Balad Xaawo lagu qabtay 100 Askari | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiir Dubbe oo shaaciyey in Dagaalkii Balad Xaawo lagu qabtay 100...
Wasiir Dubbe oo shaaciyey in Dagaalkii Balad Xaawo lagu qabtay 100 Askari
Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo goordhaw Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in ciidanka dowlada guul weyn ka gaareen dagaalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo.
Waxa uu sheegay Wasiirka in dagaalka ku jabiyeen jabhad uu sheegay in ay soo abaabushay dowlada Kenya kuwaa uu tilmaamay in xalay iyaga oo garab ka helaya ciidamada Kenya kasoo gudbeen xadka weerarna kusoo qaadeen Balad Xaawo.
Wasiirak Warfaafinta ayaa sheegay in ciidankii weerarka kusoo qaaday degmada Balad Xaawo laga qabtay ku dhawaad 100-askari ayna hada ku jiraan gacanta ciidamada milatariga Soomaaliya.
“Ciidanka Kenya iyo jabhadii ay quudineysay ayaa xalay saq dhexe soo weeraray Balad xaawo iyagoo ka soo gudbay xuduuda si ay u qabsadaan magaalada muhiimka ah ee Baladxaawo taasi oo dhaawaceysa Qaranimada iyo Madax banaaninda, Jabhadii iyo ciidankii shiSheeye in laga adkaaday ayaan shacabka ugu bishaareynayaa, In ku dhow 100 maxbuus ayaa dagaalka lagu qabtay, waana la jebiyay”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Dagaalka xalay ka qarxay degmada Balad Xaawo ee u dhaxeeyay ciidamada dowlada federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa dhaliyay khasaaro aad u xoogan, waxaana dagaalka labada dhinacbo ka sheegteen guulo.
Previous articleBanaanbaxyo waa weyn oo Gil gilay magaalada Muqdisho looga soo horjeedo Farmaajo
Next articleMadaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo shegay in ay la wareegeen xaruunta degmada iyo saldhiga booliiska degmadaasi..
Wararka ka imanaya Degmada Dayniile ee Gobolka banaadir ayaa sheegaya in Ciidamada booliiska saldhiga degmada Dayniile ay xalay xaafada Raadeelka ee degmada Dayniile ku...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shir guddoomiyey shirka Golaha Wasiirada Dowlad...